Ahiahy kolikoly :: Voasariky ny polisy vao maraina tao Paris i Ahmad • AoRaha
Ahiahy kolikoly Voasariky ny polisy vao maraina tao Paris i Ahmad
Voarohirohy amina raharaha kolikoly, ka nodidian’ny Ofisy misahana ny ady amin’ ny kolikoly sy ny halatra ara-bola sy hetra (Oclciff) avy amin’ny polisy frantsay, tany Paris (Frantsa) hamaly ireo fanontaniana maro i Ahmad, filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina misahana ny baolina kitra (CAF), omaly maraina tamin’ny 8 ora 30, tao amin’ny toerana fandrai­sam-bahiny niantranoany.
Teo am-piomanana ny hiatrika ny kaongresin’ny Federasiona iraisam-pirenen’ ny baolina kitra (Fifa) hoen­tina mifidy indray an’i Gianno Infantino, filohan’ny Fifa, ity filohan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra teo aloha ity no izao sendran’ny famotorana tampoka izao.
Isan’ireo voalaza fa anton’ izany fakàna am-bavany izany ny filazana: “ny fanapahana ny fifanarahana tamina orinasa alemana mpamokatra koja­koja ara-panatanjahantena na ny Puma, izay voalaza fa fana­pahan-kevitr’olon-tokana” sy ny “fiaraha-miasa vaovao teo amin’ny orinasa frantsay Technical Steel sy ny CAF, izay mitentina 830 000 dôlara (manodidina ny telo arivo tapitrisa ariary)”, raha ny notaterin’ny gazety Jeune Afrique ary niparitaka tamin’ ireo tambajotrana “internet” maro, omaly maraina.
Fiventesana ny mangarahara
Mitsinkafona ny fifandrai­sana akaiky eo amin’i Ahmad sy ny tompon’ilay orinasa Technical Steel. Mbola voa­tonontonona ho nahatonga izao i Amr Fahmy, sekretera jeneralin’ny CAF teo aloha, teratany ejipsiana izay voa­roaka tao amin’io sehatra fara-tampon’ny baolina kitra aty Afrika io.
Nandiso ny fiampangana azy avy hatrany i Ahmad, filohan’ny CAF, nanoloana an’ireo mpaka am-bavany raha ny tatitr’ireo gazety amin’ ny “internet”, any ivelany hatramin’ny omaly hariva.
“Nifanarahan’ny rehetra tao amin’ny CAF sy nangarahara ny fandraisana ireo fanapahan-kevitra ireo fa tsy an’ olon-tokana”, hoy izy tao anatin’ny fivorian’ny Kaonfederasiona afrikanina, tany an-toerana. “Maro ireo fanenjehana saingy tsy hatao hisa­kana ny fampandrosoana tian-katao aty Afrika izany”, araka ny teniny tamin’ny volana avrily nandritra ny kaongresin’ny CAF.
Talohan’izao dia efa notorian’i Amr Fahmy momba ny raharaha kolikoly sy fanararaotana ara-nofo ihany koa ity teratany malagasy filohan’ny CAF ity. Isan’ ireo nahavoatondro molotra ny CAF ihany koa ny momba ny lalao famaranana miverina ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika isan-tarika izay nihaonan’ny ES Tunis (Tonizia) sy ny Wydad Casa­blanca (Maraoka). Andrasana ny ho tohin’ity raharaha ity.
Nanamafy ny avy ao amin’ ny biraon’ny CAF eto Madagasikara fa: “tsy nisy fisamborana na fampidirana am-ponja fa nandeha ara-dalàna ny fakàna am-bavany sy ny fanadihadiana an’i Ahmad”.
Fahafatesana tao an-tokantrano :: Karohina ny lehilahy ahiana ho namono ny vadiny